Namuhla akunakwenzeka ukuthola umsebenzisi akazi mayelana nalokho isiphequluli. Futhi lokhu akumangalisi ngokuphelele, njengoba lesipheqi se-Inthanethi namuhla - is hhayi nje uhlelo, ngawo abantu abakwazi uvakashela amasayithi abawuthandayo, futhi iyithuluzi elinamandla kakhulu lo msebenzi.
Yiqiniso, ukuphepha nozinzo isicelo kufanele njalo zinakekelwe. Ikakhulukazi kumayelana nokusetshenziswa inguqulo yamuva kakhulu, njengoba ukukhishwa ubudala ngokuvamile sengozini kakhulu ukuhlaselwa malware. Uma sikhuluma ngenkinga-aspect yokwanda iziphequluli, ngokuvamile kakhulu kubasebenzisi ukucabanga, ukuthi ubuyekeze "Mozilu".
Iqiniso lokuthi i-Google Chrome futhi wadala on ngesisekelo yayo iziphequluli wenze lokhu ngokuzenzakalelayo, IE uthola ngokusebenzisa i-Windows Update service, futhi abantu abakhetha ukusebenzisa uhlobo oluthile izinhlobo "exotic" iziphequluli, futhi labo abazokwazi siqonde impikiswano yokuvuselela.
Yingakho namuhla sizoxoxa indlela yokuthuthukisa 'Mozilu ". Yenza akunzima.
Lena - indlela kakhulu elula, okuyinto akufanele uhlangabezana nobunzima, ngisho abasebenzisi abangenalwazi kakhulu. Okokuqala, vula main isiphequluli zokusebenza iwindi. Esandleni sayo sokunene kukhona isithonjana ngesimo kolayini ezintathu. Chofoza ngayo inkinobho yesinxele, bese lehla imenyu yezilungiselelo.
In the right ekhoneni phansi icon yayo has a uphawu lombuzo. Chofoza ngayo inkinobho yesinxele, bese kufika ibhokisi lengxoxo esilandelayo. Kufanele ukhethe "Mayelana Firefox». imenyu livela, ekhombisa version isiphequluli sakho, futhi ngenhlanhla i-Update Service uhlola izibuyekezo.
Uma kukhona atholakala, isiphequluli kuyoba ukufaka ngokuzenzakalelayo. By endleleni, kungenzeka ukubuyekeza "Mozilu" ukuze kamuva baphendukele uhambo olunjalo emhlabeni imenyu? Yebo, kungcono ngempela, kodwa uqale ukushintsha ezinye izilungiselelo ohlelweni.
Thina ukumisa isiphequluli lula inqubo
Nalapha futhi, vula kuwindo labaseminyakeni hlelo. Nalapha futhi, cindezela kwesokunxele inkinobho yegundane isithonjana ngesimo odwi ezintathu, kulandele ngokuchofoza uphawu lwegiya (Izilungiselelo). Sithola ebhokisini main ingxoxo, lapho ungakwazi ukushintsha eziyisisekelo izilungiselelo isiphequluli.
Khetha "Okuthuthukisiwe" ithebhu. Kule thebhu, kukhona iphuzu "izibuyekezo" ukuthi sikhetha, ngokuchofoza ngayo inkinobho yesinxele. Uzinake ifulege ukhetho lokuqala, "ngokuzenzakalela". It is ikakhulukazi ukuhanjwa abasebenzisi abangenalwazi imfundamakhwela abangakwazi bayakhohlwa kokuba ukufaka izibuyekezo esipheqululini sakho.
abasebenzisi abanolwazi kwinto Kunconywa "Hlola ... kodwa isinqumo yimina." Kulokhu, uhlelo sizokhuthaza Iqiniso khona update, kodwa isinqumo langempela mayelana nokufaka yabo kuzokusa. Ziyini izinzuzo ezinjalo esimweni? Iqiniso liwukuthi bonke akuyena ngaso sonke ukukhishwa yakamuva ye-Mozilla Firefox babe ukuzinza enkulu nesivinini, kodwa ngoba ngezinye izikhathi kufanele bawe back on izinguqulo ngaphambili.
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi eminyakeni yamuva: Abasebenzisi abaningi baye babika ukuthi 30 umndeni-Firefox kuyahluka umane ukwenama "voracity" maqondana inkumbulo, futhi le mfanelo is wamemezela kangangokuthi kumakhompyutha kancane usebenzise inguqulo yakamuva ngokuphelele engenakwenzeka.
Nakhu ukuthi uthuthukise "Mozilu" usebenzisa imodi othomathikhi. Kodwa yini okufanele uyenze uma internet ungenayo konke ngokulandelana, ngakho uma uzama ukufaka ngokuzenzakalelayo inguqulo fresh kohlelo ukhiqiza nephutha? Uma une Esimweni esinjalo, kubalulekile ukuba ufake iyiphi evamile wokulanda, bese uvakashele iwebhusayithi olusemthethweni hlelo.
Kuyadingeka futhi balande ukufakwa iphakethe isicelo (mayelana 30 MB). Khona-ke ifayela elandiwe udinga uchofoze inkinobho yegundane kwesokudla bese ukhetha "Run njengoba umlawuli" okukhethwa kukho kusukela kumenyu yokuqukethwe. Uqala i uhlelo kokuthuthukisa, bese udinga kuphela izikhathi ezimbalwa uchofoze inkinobho "Okulandelayo". Ngokuvamile, isiphequluli Mozilla Firefox bese ithuthukiswe kuya enguqulweni yakamuva.
"I-Android" kanjani ukuthi kube, uma usebenzisa i-OS? Phela, lesi simiso futhi wadala version okhethekile isiphequluli njengoba Mozilla Firefox, futhi kufanele zibuyekezwe njalo! Thina khawuleza ukukuqinisekisa ukuthi kulokhu inqubo kuyoba lula ngisho.
Udinga nje hamba ku-Google Play, bese isimiso sihlola ukubuyekeza ngokuzenzakalela ohlelweni lonke, kuhlanganise ukukhishwa yakamuva isiphequluli. Uma kukhona atholakala, "i-Android" uzokubuza kwemvume yakho ukufaka, bese ibuyekezwe imakwe kuya enguqulweni yakamuva.
Okufanele ukwenze uma isiphequluli "Mozilla Firefoh" buyekeza ukuthi sizama, enqaba ukufaka izibuyekezo?
izinkinga ezingaba khona futhi izixazululo zabo
Kaningi kuyenzeka ukuthi uma uzama ukuvuselela ngokuzenzakalelayo pops up iphutha "Ayikwazi ukuqedela inqubo ...". Siyini isizathu - alaziwa. Kunoma ikuphi, technical support inika ulwazi kunalokho eziphikisa. Ukuzama ukulungisa leli phutha, zama ukusula inqolobane kanye yesikhashana amafayela esebenzisa indinganiso Windows amathuluzi noma Tinsita third-party. Mhlawumbe ngemva kwalokhu ngeke ubuyekeze isiphequluli sakho "Mozilu".
Esimweni sokuqala, chofoza "Qala", ikhuluma khona 'Zonke Izinhlelo ", ukuthola" Standard ". kukhona into "Amathuluzi" kule folda. Chofoza kuso bese ukhetha uhlelo "Disk lokuhlanza." Gijimani isicelo, ukhethe idrayivu ukuba zihlanzwe (C, ngokuvamile).
Uma inqubo yokuhlanza usuphothuliwe, ungazama ukuphinda update "Mozilu". On website Russian futhi has a lot of izihloko ezihlobene nezinkinga ukufakwa izinguqulo ezintsha. Uma ungatholi, kunengqondo ukufunda lezi zindlela.
Nokho, ungenza kube lula. Susa isiphequluli (in the "Control Panel," "Izinhlelo kanye Izici"), khona-ke uyilande kusukela website esemthethweni ye-ukufakwa iphakethe. Phinda lokusebenza. Ngokuvamile, le ndlela elula kwenza kube nokwenzeka ukuba ukuxazulula zonke izinkinga.
Khumbula ukuthi amaphutha kungaholela izibuyekezo yezingxenye asele isicelo. Ngokuphumelelayo uwasuse ukusiza Revo Isikhiphi Pro noma uhlelo lokusebenza olufanayo.
Kanjani ukuze ushintshe usayizi izithombe?
Kanjani ukulungisa ukuthola ukuxhumana ngokusebenzisa 8080 (port): imfundo, umdwebo kanye nokubuyekeza